Sonke siyazi ukuba izifo zingcono ukunqanda kunokunyanga. Kodwa indlela yokuphakamisa ukukhusela komzimba kwintsana? Kuyimfuneko ukuyicutha kwiinyanga zokuqala!
Injongo ephambili yokuqina kukunyusa ukuxhatshazwa komzimba wengane kwimimandla engqongileyo engqongileyo. Oku kunciphisa kakhulu iziganeko zezifo, kuba abantwana abaxubhayo abamesabi ngumoya onamandla, akukho tshintsho lokushisa, okanye i-hypothermia. Isilwanyana esilungisiweyo silungele ukulwa kubanda! Ukukhawuleza kuphucula ukusebenza kwezitho zangaphakathi, kukhuthaza ukuphuhliswa kwemizimba, kusebenze iinkqubo ze-metabolic, kuqinisa inkqubo ye-nervous. Ukuqala kokukrakra kunokusukela kwiminyaka eveki emva kokuba umntwana uhlolwe ngumntwana wezilwanyana kunye nokuvunyelwa kweenkqubo zezempilo. Ukuze kubekho inzuzo enokuzuza ngokwenene, abazali mabahambelane nemithetho emininzi.
Ukunciphisa umntwana kuyimfuneko unyaka wonke-akufanele kubekho ikhefu, kwaye ubunzima kunye nobude beenkqubo ezinzima kufuneka zandiswe kancane kancane.
Ukuqheleka kweenkqubo kukubalulekileyo ekusebenzeni kanzima. Ukuba ukwenza oko "kanye emva kwexesha," awukwazi ukulindela iziphumo ezilungileyo.
Zama ukwenza zonke iinkqubo ngendlela yemidlalo. Impembelelo yokuqina iyakwandisa kuphela ukuba umntwana uyayithanda le nkqubo. Thatha ingalo konke umntwana wakho akuthandayo - amathoyi, iimvumi, iingoma, imifanekiso. Ukuphucula, ukwenzela ukuba i-crumb iyonwabile kwaye inomdla.
Kunconywa ukudibanisa ukuqina ngokuxilisa, ngoko ukuphuhliswa komntwana kuya kuhambelana, kunye nentlalo-ntle.
Njengokuba kuboniswa ngamanani e-medical, abantwana abomeleleyo ngabazali banamandla okukhusela kwaye banokugula okungaphantsi kwama-3.5 kunye ne-ARVI kunontanga yabo engacatshanganga.
Musa ukugqithisa okanye utywala umntwana ngexesha leenkqubo. Ukufudumala kwiintsana kusengaphelelekanga, kwaye ukuguqulwa kweqondo lokushisa komzimba kuqhelekileyo kubo. Kodwa ngokwenene ukuqina akufanele kube yingozi nakweyiphi na indlela! Ngoko ke, jonga ngokucophelela ukushisa kwomoya kunye namanzi, ungayigqithisi ngokuhlala kwintsana elangeni. Njalo uthabathe iimpahla ezifanelekileyo kunye nezicathulo zomntwana kwaye ukhusele ikhanda lakhe elangeni.
Kuhle kakhulu, xa intsapho yonke iyancipha ngokukhawuleza. Okokuqala, luncedo kwimpilo yendlu, kwaye okwesibini, uya kuba ngumzekelo omhle kumntwana wakho, kwaye uya kukuvuyela ngokuphinda.
Hlaza umoya otsha!
Zonke iinkqubo ezinxulumene nokucima ziyakwazi ukwahlukana ngokwemimiselo ibe yintloko kunye neyodwa. Kwiinkqubo eziqhelekileyo siqonda ulawulo oluchanekileyo lolo suku, ukondla okwaneleyo kunye ne-gymnastics, kunye nomoya, amanzi kunye neenkqubo zelanga zithunyelwa kwiintlobo ezikhethekileyo.
Ngoko, masiqale ngohlobo olunzima lokuqina - umoya omtsha. Iquka ukuhambisa igumbi, iibhafu zomoya ngexesha lokukhwabanisa nokuhamba. Inkqubo yokuqala yokuqala yeentsana ihamba. Amabele achitha amandla amaninzi aze adle i-oksijini eninzi, ukuhlala umoya otsha rhoqo kubalulekile kwimpilo enhle. Ukufudumala kwigumbi apho umntwana ekhona khona kuyimfuneko nanini na kunyaka. Ehlobo, iifestile okanye iwindow kufuneka ivule rhoqo, kwaye ebusika igumbi linomoya ophindwe kabini ngosuku. Kwaye umntwana akadingeki ukuba athathwe ngaphandle kwegumbi ixesha lokutshiza, kwanele nje ukusigubungela ngengubo. Okukuphela kwendawo yokungenisa umoya. Iqondo lokushisa lomoya eliphezulu kwigumbi apho umntwana ufumane khona ngu-20-22 ° C.
Ngoku, ngeminyaka yenkqubela phambili yezobuchwepheshe, kunokwenzeka ukulawula ukungcola kunye nokushisa kwomoya ngoncedo lweenkqubo ze-microclimate kunye ne-air conditioners. Kodwa khumbula ukuba akufanele usebenzise kakubi oku: akukhuthazwa ukuba ubeke ibhokhwe ebomini apho umoya wesimo sezulu usebenza rhoqo.
Ukukhawuleza akumele kube yingozi nakanjani!
Olunye uhlobo lokuqina - iibhakabhaka zomoya ngexesha le-swaddling. Ngomntwana onempilo, le nkqubo inokwenziwa kwisibhedlele. Isiseko salo sisekelwe ekubeni iimvuthu zivunyelwe ukuba zilale emathubeni abo kwisitya esitshintshileyo ngexesha lokutshintshela kunye nokutshintsha i-diapers. Ekuqaleni, ubude beli nqubo ngu-1-2 kwemizuzu, kodwa ngokuthe ngcembe, kanye kanye ngeveki, unokufaka imizuzu emi-2. Ngaloo ndlela, ezintandathu ezintandathu umntwana uya kufumana iibhola zokuhlambela ngomoya kwisiqingatha seyure. Kuhle kakhulu ngexesha elifanayo ukuyenza ne-baby gymnastics yokukhanya.
Ukuhamba ngesitrato esichukumisayo kwisitrato akusiyo nje into emnandi, kodwa kwimeko enzima. Iintsana ezizalwe ehlobo, zithatha isiqingatha seyure kwisitrato sinokukhawuleza emva kokukhulelwa esibhedlele. Ukuba umntwana wazalwa ngexesha elipholileyo lonyaka, "ukuyeka" ukuhamba kwakuya kuba yikholamu ye-thermometer. Isifuba singathathwa kuphela kwisitalato ukuba izinga lokushisa liye lahla ngaphantsi -5 ° C. Ubungakanani bendlela yokuhamba uhambo lwemizuzu eyi-15-20. Abantwana abaneminyaka engama-3 nangaphezulu sele bebekezelela iqhwa kakuhle kwaye -10 ° C. Kwaye abo bana bantwana abawela umgca wobudala kwisiqingatha sonyaka sele benesibindi ukuba ikholam ye-thermometer ibonisa -15 ° С. Into ephambili, khumbula ukuba ukuqina kukuqiniswa kwempilo, kwaye kungabangela ingozi kuyo. Usana kufuneka lufudumele kwaye lube luhle, akufanele lube lukhuni!
Ukuhlala elangeni kwandisa imizimba yomzimba, kunika umntwana inkokhelo ye-vivacity namandla. Nangona kunjalo, kufuneka kukhunjulwe ukuba iintsana ukuya kunyaka zivutha kakhulu kwi-ultraviolet, ngoko ke, zichazwe ngokuthe ngqo kwiibhafu zokukhanya kwelanga. Zifanelekile ukuba zibe zichithwa ngelanga. Ukususela kunyaka ukuya kwiminyaka emithathu, iinkqubo zelanga zenziwa ngokucophelela kwaye zinyanzeliswe, kwaye kuphela abantwana abangaphezu kweminyaka emithathu kuphela banokushona ilanga elangeni. Ehlotyeni kwimeko yemozulu yaseRussia, iinkqubo zelanga zinconywa ukuba zithathwe kwiiyure eziyi-9 ukuya kwi-12, kwaye kusezantsi ukusuka ngo-8 ukuya ku-10 ekuseni.
Ukutshatyalaliswa kukushisa komoya +30 ° C nangaphezulu.
Ekwindla, entwasahlobo nasebusika, imisebe yelanga idlula ngaphezu kwehlobo, ngoko iyanceda kakhulu umntwana, makabeke ubuso bakhe kubo ngesibindi baze bafumane i-vivacity!
Ukucima ngamanzi kuthathwa njengenye yezindlela eziphumelelayo zokuqina. Iintlobo zamanzi iinkqubo kunye neendlela zokuqina zixhomekeke ngqo kwixesha lomntwana.
Ukuba umntwana uneminyaka engaphantsi kweenyanga ezintathu
Sula zonke iinxalenye zomzimba wengane - ipenki nemilenze - kunye ne-napkin okanye i-mitten edibene ngamanzi malunga nemizuzu emibini. Ekuqaleni, ukushisa kwamanzi kufuneka kube ngu-37 ° C, kwaye emva kweveki kufuneka kuncishiswe ngeyure enye, de kube i-thermometer ifinyelele kwiqondo lokushisa lika-28 ° C. Ukutshabalalisa kwenziwa ngolu hlobo: kuqala isandla sesana ukusuka ezandleni ukuya kumahlombe, kwaye imilenze - ukusuka kwiinyawo ukuya emadolweni.
Ukuhlamba ubuso bomntwana imizuzu emi-2. Ekuqaleni, ukushisa kwamanzi kufanele kube ngu-28 ° C, kwaye emva kweentsuku ezimbini kufuneka kuhliswe ngezinga elilodwa, ngokuthe ngqo kufike kwi-20 ° C.
Ukuhlamba imihla ngemihla nge-37 ° C imizuzu engama-5, emva koko umntwana athululelwa amanzi kwiqondo lokushisa elingaphantsi-35 ° C.
Ukuba umntwana uneminyaka engama-3 ukuya kwe-10 ubudala
Ukuhlambela imihla ngemihla ngeqondo lokushisa kwamanzi ngo-37 ° C, emva koko umntwana athululelwa ngamanzi apholileyo (35 ° C) ukusuka kwi-scoop aze asule umzimba.
Ngokubanzi ukumsulwa komzimba womntwana nge-mitten, eyayixutywa ngaphambili ngamanzi amanzi atyuwa (ityhula ye-ityhupuni e-8 ilitha yamanzi). Ukusula kuqhutywa ngokulandelelana: ukuphatha, imilenze, isifuba kunye nomva. Ekupheleni kwenkqubo, umntwana kufuneka asuswe ngomlilo ngeloyile.
Ukuhlamba ubuso bomntwana ngamanzi ngehla ngokuthe ngcembe kwinqanaba lokushisa (1 ixesha kwiintsuku ezimbini) ukusuka kwi-28 ° C ukuya ku-20 ° C.
Ukuba umntwana unyanga ezili-10 ukuya ku-1 ubudala
Ukuhlamba imihla ngemihla, njengamaqela angaphambili, emva koko umntwana athululelwa kwi-ladle ngamanzi kwiqondo lokushisa eliphantsi (35 ° C).
Ukugaya okumanzi kwamathanga, imilenze, isifuba kunye nomqolo ngamanzi atyuwa.
Ukuthululela: umntwana uhlala okanye u eme ebhodini, kwaye unina okanye utata uyamthukuthelela ngomlambo onamandla ohlamba ngokulandelelana-emuva, isifuba, isisu kunye neepenki.
Ubushushu bamanzi buqala ngo-37 ° C, kwaye emva kweveki kufuneka kuyancitshiswe ngeyure enye ukuya kufike kwi-28 ° C.
Ucoceko olusenyongweni lentombazana eyangena kwisigaba sokuqala sobuntwaba (iminyaka eyi-7-11)
Ziziphi oogqirha kufuneka baphathwe nomntwana oneminyaka engaphantsi kwe-1 ubudala
Ngaba i-parabens, i-sulfate kunye ne-silicones eyingozi kwizimonyo ezinobungozi?
Amacici angamafashini-2018: njani ukuwagqoka ngokuchanekileyo
Iifowuni ezingavumelekanga izitya: iresiphi
Yintoni ebangela ukucasuka kumadoda
Ioyile eziyimfuneko yokunciphisa umzimba
Ukhilimu omuncu ngecolethi emhlophe
I-skett skirt i-Fashionable skirt 2015: Yintoni enokugqoka iengubo kwikheji